बन्दुकको टुप्पोमा आमाको अनुहार देखें | khaltinews.com
फोनको घन्टी बज्यो । ममीले फोन उठाएर ‘हेलो’ भन्नुभो ।
घरबाट कहिल्यै टाढा नगएकी भएर होला, ३-४ दिनपछि ममीको स्वर सुन्दा सही नसक्नु भएर भक्कानिएँ । उता ममी पनि रुन थाल्नुभो । उहाँले कुरा गर्न नसकेपछि अंकलसँग कुरा गरेँ, “म ठीक छु, राम्रैसँग आइपुगेँ, हजुरलाई कस्तो छ ? कता होइसिन्छ ? भाइहरु कता छन् ? सबैलाई सम्झेको छु भन्दिस्यो है ।”
एकदिन म र साथी उनैसँग काम सोध्न गयौँ । उनले घण्टाको ३ डलर दिने बताइन् । काम नपाएर भौँतारिरहेको बेलामा ३ डलर पनि धेरै लागेर ‘हुन्छ’ भन्यौं । अर्को दिन क्लास सकाएर पछाडिको ढोकाबाट काममा गयौँ ।
बूढीले २ बोरा प्याज दिएर भनिन्, “ल काट, यही हो काम ।”
स्टुडेन्ट भिसामा आएको, जहाँ पायो त्यहीँ काम नपाइने । काम नगरी पनि नहुने । कलेजको फी, खाने/बस्ने खर्च उस्तै । नेपालबाट लिएर आएको ऋण छँदै थियो, फेरि-फेरि पैसा मगाउन पनि नसकिने । जसरी पनि काम गर्नैपर्ने बाध्यता थियो । त्यस्तैमा ‘कन्भिनियन्ट’ स्टोरमा काम पाएँ । स्टोरमा काम पाउँदा पनि कति खुसी लाग्ने । अमेरिकामा काम पाउँदा जतिको खुसी अरु कुनै कुराले लाग्दैन ।
९११ मा फोन उठ्यो । मैले सबै बेलीविस्तार लगाएँ । उताबाट आवाज आयो, “कत्ति नडराउनुस्, हामी आइहाल्छौं तुरुन्तै ।”
मैले रुँदै भनें, “एकजनालाई गोली लागेको छ, छटपटाइरहेका छन् ।”
“तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ बस्नुस्,” भन्दै उनीहरू २ मिनेटभित्रै आइपुगे ।
पुलिसले ढोका ढक्ढकाए । मैले सिसाबाट हेरेर ढोका खोलिदिएँ । म भुइँमै बसेर रोइरहेकी थिएँ, पुलिसले आएर अंकमाल गर्दै भने, “नआत्तिनुस्, केही हुँदैन ।”
म्यानेजर, साहुनी, को-वर्कर, साहूका साथी सबै आए । साहू त्यतिबेला पाकिस्तान थिए । साहुनी एकदमै असल थिइन्, आउनेबितिकै छोरीलाई झैं अँगालो मारेर रोइन् । मैले त्यतिबेला ममीलाई असाध्यै मिस गरेँ । ममीलाई अँगालो हालेर ‘म बाँचेँ ममी’ भन्दै रुन मन लागेको थियो ।
अमेरिका पक्कै पनि सपनाको देश हो । नेपालमा पूरा गर्न नसकेका सपना यहाँ आएर पूरा गर्न सकिन्छ । मैले पनि नयाँ जीवनसँगै धेरै सपना, रहरहरु पूरा गरेकी छु । तर, एउटा सपना पूरा गर्न हजारौँ सपनालाई त्याग्नुपर्छ । घरपरिवारबाट टाढिनुपर्छ । हाम्रो बाध्यता हो बिदेसिनु । यदि देशमै राम्रो पढाइ, राम्रो कमाइ, राम्रो बसोबास हुन्थ्यो भने शायद हामी बिदेसिने थिएनौं । र, आफ्नै देशमा बसेर परिवारसँगै चाडपर्व मनाउँथ्यौं !(बाह्रखरीबाट साभार गरिएको)